Unhinged (2020) – Gold Channel Movies
Video Sources 3692 Views
He can happen to anyone.Jul. 02, 2020USA90 Min.R
ကျွန်တော်တို့ လူမှုဘဝကြီးထဲမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတာ အဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိမယ် အဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိမယ်၊ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အရာရာဟာလှပနေပေမယ့် အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ အရာရာဟာ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန် ဒေါသထွက်စရာတွေဖြစ်နေမှာပဲ။ လူတွေကြားထဲမှာ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတော့ ဒေါသတွေ မကျေနပ်ချက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ အများဆုံးတွေ့နိုင်တာက လမ်းပေါ်မှာပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် ကိုယ့်မကျေနပ်ချက်တွေကို ကားမောင်းရင်း ကားပိတ်တာတွေ ကိုယ့်ကိုသူများကျော်သွားတာတွေ လမ်းမပေးလို့ ဒေါသထွက်တာတွေ အဲ့တာတွေအပေါ်မှာ အများဆုံးလူတွေပုံချမိနေကြတယ်။
ဒီကားထဲမှာလည်း အဲ့လိုပဲ မင်းသမီးက ကားလမ်းပိတ် အလုပ်နောက်ကျနေတော့ ရှေ့ကကားကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ဟွန်းသွားတီးမိတယ်၊ ကံဆိုးချင်တော့ သူဟွန်းသွားတီးတဲ့ ကားပိုင်ရှင်က အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပြီး နာကျည်းမှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ဆီမှာလည်း ဒေါသဆိုတဲ့ ခံစားချက်ထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်ရော … ကျန်တာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
လူသတ်သမားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိလျှောက်လုပ်နေတာတွေကို တစ်ကားလုံးသည်းထိပ်ရင်ဖိုနဲ့ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး၊ (အပြင်မှာတော့ အဲ့လောက်မကြမ်းဘူးပေါ့)။
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာတွေပဲအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ဒေါသကိုတော့ စရိုက်စုံလူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ မဖွင့်ထုတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီကားကြည့်ရင်း သိလိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Translated & Review by Phyoe Ei Zin Pez
Encoded by MgKyaw
Size – 900MB / 300MB
Genres – Action, Thriller
Run Time – 1 Hr 30 mins
Original title Unhinged
IMDb Rating 6.1 11,535 votes
TMDb Rating 6.3 254 votes
Download Megaup SD Myanmar 300MB
Download Megaup HD Myanmar 900MB
Download Userdrive SD Myanmar 300MB
Download Userdrive HD Myanmar 900MB
Download Mega SD Myanmar 300MB
Download Mega HD Myanmar 900MB
Download G Drive SD Myanmar 300MB
Download G Drive HD Myanmar 900MB
© 2020 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved. Powered by DooPlay